सेञ्चुरी बैंक : कम्पनी विश्लेषण (मंगलवार, १७ असार २०७६)
१ वर्षको कारोबार अवधिमा बैंकको शेयरमूल्य सबैभन्दा बढी रू. २ सय पुगेको छ भने न्यून मूल्य रू. १ सय ५९ रहेको छ । सोमवार बैंकको शेयरमूल्य रू. १ सय ६६ कायम भएको छ । सो दिन बैंकको २६ हजार २ सय ३८ कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ । बैंकले गतवर्षको सञ्चित मुनाफाबाट २ प्रतिशत बोनस शेयर र ४ दशमलव ५ प्रतिशत नगद लाभांश शेयरधनीलाई दिएको छ । बैंकले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म रू. ६१ करोड ६ लाख ७१ हजार खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा गतवर्षको सोही अवधिमा रू. ६७ करोड १५ लाख २६ हजार रहेको थियो । गतवर्षभन्दा यस वर्ष खुद नाफामा कमी आएको छ । बैंकले गतवर्ष रू. ९३ करोड ६६ लाख ४४ हजार र यस वर्ष रू. ८७ करोड ३३ लाख ७१ हजार सञ्चालन नाफा गरेको छ । सञ्चालन मुनाफा घटेकाले बैंकको नाफामा कमी आएको हो ।
2019-07-02 - 96 view(s) - abhiyan